Ko PR6 backlinks ingakanganisa sei nzvimbo yako SEO?
Munhu wose anoziva kuti zvakanakisisa zvivako zvekuvakwa kwehutano hwehutano hwakakwirira dziripamusoro PageRank domains. Vanoshanda kukusimudzira tsvakurudzo yako yekutsvaga nekugadzirisa nzvimbo yako pakutsvaga peji peji.
Usati watanga kuumba purogiramu ye backlink, unofanira kutsvaga nekuongorora nezve PR6, PR7, nedzimwe nzvimbo dzekutsvaga injini. PageRank inonyanya kukoshesa chiitiko chinoratidza hutungamiri hwewebhu - fiche de suivie du personnel services. Iyo inoshanda kuyera kukosha kwewebhu yewebhu kuburikidza nekuverenga nhamba uye hutano hwehukama hunongotaura kwahwo. Mune mamwe mazwi, iyo yakaoma yekugadzirisa system yakagamuchirwa neGoogle kuti iite nzvimbo dzewebhu. Nhamba yeRoRR ishoma, uye iyo yakawanda ndeyegumi. Mumazuva edu, PageRank haisi kushanda semuenzaniso wega webhupenyu hunobudirira. Izvo hazvirevi kuti yakakwirira yekutsvaga, kana kuwedzera kwemugwagwa.
Zvisinei, kuwana backlinks kubva munzvimbo dzakakwirira dzeP PR zvinoramba zvichikosha kuti unhu hwekuvaka yako hunovandudzwa. Google zvikwereti chete zvinorumbidzwa uye ndezvenguva yakange iripo mapu ewebhu ne High PageRank. Ndokusaka kusika backlinks ikoko kunoudza Google pamusoro pehuwandu hunokosha. Kana yako link profile ine PR6 - PR10 backlinks, iwe uchatonga paGoogle TOP.
Nzira dzekugadzirisa PR6 backlinks
Bwerekera kumakwikwi vako backlinks
kwete webmaster imwechete munharaunda yako inoda kuumba hukama hwakanaka hunofananidza. Nyaya dzakawanda dzeWeb web dzinowanikwa munharaunda yako dzine mazano ekuvakisa akasimba uye dzinoramba dzichitsvaka mikana mitsva yekuvakidzana. Unotenda kana kwete, iwe unogona kubatsirwa kubva kumukwikwidzi wako kumashure. Vakaita zvose basa rekuvaka chivako nokuda kwenyu. Saka, zvinhu zvose zvaunoda ndezvekukwikwidzana backlinks neRLR framework.
Unofanirwa kuitisa tsvakurudzo yekukwikwidzana uye ona kuti vadzikwi vako vekutanga vari kuvaka sei mazano. Uye pakupedzisira, unofanirwa kudzokorora kana kungokwereta maitiro avo. Iwe unogona kutarisana nemichina iyo makwikwi ako akasika mararamiro awo uye anobvunza pamusoro pemikana yekuvakira mazita eimba yako.
. Icho chiri nyore, asi kupa webmasters nemigumisiro yakaisvonaka.
Chokutanga pane zvose, iwe unofanirwa kuitisa kutsvaga kwemashamba emisika uye kuwana zvinyorwa zvakakurumbira uye zvakabatana zvakanyanya. Zvino iwe unofanirwa kuita kuti zvinyorwa zvako zvigadzirwe nezvinhu zvawaverenga. Zvisinei, iwe unofanirwa kudzivisa kopi-kudonha sezvachaita kutamba newe. Iwe unofanirwa kugadzira nyaya yakasiyana-siyana kubva pakutsvakurudza kwako. Zvadaro iwe unoda kuisa chibatanidziro chekare yechinyorwa chino kuti uone kuti vashandisi vanogona kubatanidza kune itsva yako yakagadzirirwa chigadzirwa chemukati pane.
. Zvisinei, ine musiyano umwe mukuru. Inoshanda kune avo vanototora chikamu chehupenyu chinoda kukurudzirwa. Muchiitiko ichi, iwe unoda kuvimba pamagariro akawanda ekubatanidza mikana. Iyi nzira inokupa mukana wekuwana mimwe yemamwe mapeji epawebhu akatevedzana nemusoro unofanana newewo une zvikwata zvizhinji zvinotaurira kwavari.